सम्झौता अक्षरश: पालना नभएसम्म सत्याग्रह : डा. केसी – Daunne News
सम्झौता अक्षरश: पालना नभएसम्म सत्याग्रह : डा. केसी
काठमाडौँ — डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूसँग गरेको सम्झौता अक्षरश: पालना नगरेसम्म सत्याग्रह जारी राख्ने बताएका छन् ।
६ औं अनशनको १२ औं दिन आइतबार कान्तिपुरसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले भने, ‘ओलीजीलाई भन्छु, तपाईंसँग न्यूनतम इमानदारी छ भने हामीसँग गरेको सम्झौताअनुसार हुबहु चिकित्सा विधेयक पारित हुनुपर्छ ।’
गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा दिने शिक्षण संस्थान तथा ठूला अस्पताल देशभर न्यायोचित वितरण भए कुनाकाप्चामा बस्ने नेपालीको समान पहुँच हुने उनको भनाइ छ ।
१५ औं अनशनमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको सम्झौतालाई तोडमरोड गरेर शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चिकित्सा विधेयक समितिबाट पारित गरेको आरोप उनले लगाए । ‘विधेयकबाट हाम्रा बुँदा हटाएर ओलीजीको पार्टीका सांसदहरूले माफियामुखी बुँदा राखे,’ केसीले भने । उनले विद्यार्थी र जनतामारा बुँदा राखेर चिकित्सा विधेयक पारित गरिएको दाबी पनि गरेको कान्तिपुरमा खबर प्रकाशित छ।
आईसीयूबाट क्याबिनमा सारियो
डा. केसीलाई आइतबार दिउँसो त्रिवि शिक्षण अस्पतालको आईसीयूबाट क्याबिनमा सारिएको छ । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रेमकृष्ण खडकाका अनुसार ९ सदस्यीय टोलीले उनको स्वास्थ्य अनुगमन गरिरहेको छ । केसीको रगतमा सेतो रक्तकणिकाको संख्या ३ हजारमा झरेकाले संक्रमणको उच्च जोखिम देखिएको औंल्याउँदै डा. खडकाले दुई दिनदेखि स्वास्थ्य स्थिति स्थिर देखिएकाले क्याबिनमा सारिएको बताए । डा. केसीले एन्टिबायोटिक र स्लाइनबाहेक अन्य उपचार लिन अस्वीकार गरेका छन् ।
डा. केसीले शिक्षण अस्पताल आउने बिरामीलाई आईसीयू सेवा पाउन असजिलो नहोस् भनेर आफूलाई जनरल वार्डमा सार्न आग्रह गर्दै आएका थिए । उनमा इलाममै निमोनियाँ देखिएकाले एन्टिबायोटिक औषधि जारी राखिएको छ । कमजोरी, मांसपेशी बाउडिनेलगायतका समस्या पनि देखिएको छ ।
रेजिडेन्ट चिकित्सकहरू आन्दोलनमा
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूले डा. केसीका माग पूरा गर्न सरकारले ढिलाइ गरे कुनै पनि बेला आफूहरू कार्य क्षेत्रबाट बाहिर निस्कने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । आइतबारदेखि रेजिडेन्टहरू सरकारको विरोध र डा. केसीको समर्थनमा कालोपट्टी बाँधेर काम गरिरहेका छन् ।
शिक्षण अस्पतालमा करिब २ सय रेजिडेन्ट चिकित्सक छन् । नेसनल रेजिडेन्ट डाक्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. सुमित पाण्डेले डा. केसीका माग जायज रहेकाले सरकारले अविलम्ब सहमति पूरा गर्नुपर्ने बताए ।
उनले केही व्यक्तिको पक्षपोषण हुने गरी विधेयकमा राखिएको बुँदा हटाउनुपर्ने पनि माग गरे । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका रेजिडेन्टहरूले केसीको समर्थनमा आइतबार तय गरिएको र्‍याली स्थगित गरेका छन् । ‘केही व्यक्तिले तिमीहरूले प्रदर्शन गरे हामी पनि भित्र (अस्पताल हातामा) आएर प्रदर्शन गर्छौं भनेर धम्की दिएकाले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम स्थगित गरेका हौं,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने । उनका अनुसार प्रहरीले समेत स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने भन्दै कार्यक्रम स्थगित गर्न आग्रह गरेको थियो ।
यसैबीच, त्रिवि शिक्षण अस्पतालको गेटमा ‘आई एम विद विजय थापा’, को प्लेकार्ड बोकेर केही व्यक्तिले प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनमा सहभागी अनेरास्ववियु कीर्तिपुर इकाई अध्यक्ष मदन विष्टले प्रदर्शन डा. केसीविरुद्घ अनशन गरिरहेका विजय थापाको समर्थन तथा संसद्मा रहेको चिकित्सा विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए । उनले एक व्यक्तिको अनशनकै कारण विधेयक बन्धक बनाउन नहुनेसमेत उनले उल्लेख गरे ।